SMPTE နှင့် ပူးပေါင်း၍ ထုတ်လုပ်သည့်ရုပ်ရှင်ရုံဆိုင်ရာ NAB ပြပွဲ၏နည်းပညာဆိုင်ရာထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည်အနာဂတ်ပုံပြင်များတည်ဆောက်ခြင်းအပေါ်အာရုံစိုက်ရန် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » SMPTE အတူမိတ်ဖက်အတွက်ထုတ်လုပ်ရုပ်ရှင်ရုံအပေါ် NAB ပြရန်ရဲ့နည်းပညာထိပ်သီးအစည်းအဝေး, ဇာတ်လမ်းတွေကို၏အနာဂတ်တည်ဆောက်ခြင်းအပေါ်အာရုံစိုက်ရန်
SMPTE အတူမိတ်ဖက်အတွက်ထုတ်လုပ်ရုပ်ရှင်ရုံအပေါ် NAB ပြရန်ရဲ့နည်းပညာထိပ်သီးအစည်းအဝေး, ဇာတ်လမ်းတွေကို၏အနာဂတ်တည်ဆောက်ခြင်းအပေါ်အာရုံစိုက်ရန်
ထိပ်သီးအစည်းအဝေးလက်ရှိ & Emerging Technologies ကများနှင့်ဇာတ်လမ်းတွေကို၏အနုပညာနှင့်သိပ္ပံအပေါ်သူတို့ရဲ့သက်ရောက်မှုဆွေးနွေးမှစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကျွမ်းကျင်သူများကကိုဆွဲသား
White Plains, နယူးယော့ - ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2015 - Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society က (R) (SMPTE(R)), ယနေ့ 2015 သောဆက်သွယ်ရေး, မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, နှင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပညာရေးအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်ကြေငြာခဲ့သည် NAB ပြရန်'' s ဖြင့်ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ရုပ်ရှင်ရုံအပေါ်နည်းပညာထိပ်သီးအစည်းအဝေး (TSC), SMPTEမနက်ဖြန်၏ရုပ်ရှင်ရုံအတွေ့အကြုံကိုသတ်မှတ်ကြလိမ့်မည်သောနည်းပညာနှင့်တီထွင်ဖန်တီးဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှာဖွေစူးစမ်းထံအပ်နှံလိမ့်မည်။ "ဇာတ်လမ်းတွေရဲ့အနာဂတ်တည်ဆောက်ခြင်း" ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုရက်ကြာထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည် Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌အရပျကိုဧပြီလ 11-12 ယူပါလိမ့်မယ်။
"ဒီတစ်နှစ်ရဲ့ TSC ဇာတ်လမ်းပြောပြ၏အနုပညာနှင့်သိပ္ပံပုံဖော်တံ့သောဖန်တီးမှုနှင့်နည်းပညာတပ်ဖွဲ့များနှစ်ဦးစလုံးဆန်းစစ်, အနာဂတ်ကာလမှရှေ့ဆက်ကြည့်ရှုလိမ့်မယ်" ဟု Pat Griffis မှာပညာရေးဒုဥက္ကဋ္ဌကပြောသည် SMPTE။ "ဟုအဆိုပါဖြစ်ပေါ်နေသော cloud-based postproduction ကမ္ဘာနှင့်ပြပွဲအတွက်လာမယ့်ခြေလှမ်းများမှအကြောင်းအရာဖန်တီးမှု tools များတိုးတက်လာခြင်းနှင့် Workflows မှစ. , ဒီအဖြစ်အပျက်အနာဂတ်မှာတစ်လမ်းပြမြေပုံများကိုအလားအလာနှောင့်အယှက်တီထွင်မှုစူးစမ်း, အခြို့နေဆဲဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ, '' ပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် အမှန်ပင်သို့မဟုတ်, ငါတို့သည်သိနားလည်အဖြစ်မဆို Episode အကြောင်းအရာ "- ရုပ်ရှင် '' ။
အဆိုပါ TSC စဉ်အတွင်းတက်ရောက်မှာသီးသန့် "ပထမဦးဆုံး-ကြည့်" သို့တက်ရောက်ရန်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည် SMPTE'' s ကိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် "ပုံများ Moving" ။ Randall အမှောင်ကထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင် Travis LaBella နှင့်အတူ Howard Lukk, ကညွှန်ကြား SMPTE အနာဂတ်မှာ store မှာရှိပါတယ်ရာပေါ်ခန့်မှန်းပြောဆိုချက်များအနေဖြင့်လက်ရှိတွင်ထုတ်လုပ်မှုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပစ္စုပ္ပန်ကနေတဆင့် 20th ရာစုအလှည့်အနေဖြင့်အဆိုကို-ပုံရိပ်နည်းပညာ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်လေ့လာစူးစမ်းပါလိမ့်မယ်။
"ရုပ်ရှင်ရုံမျက်နှာပြင်နည်းပညာအတွက်နယူး Developments" မိုက်ကယ် Karagosian အားဖြင့်တည်းဖြတ်ပါလိမ့်မည် SMPTE Keith က Watanabe, Harkness မျက်နှာပြင်နဲ့ Kang Ahn, RealD ၏အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရုပ်ရှင်ရုံထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အမေရိကတိုက်၏အရောင်းဒါရိုက်တာအပါအဝင်စပီကာနှင့်အတူ MKPE အတိုင်ပင်ခံ LLC ၏သူချင်းများနှင့်တည်ထောင်သူ။ လယ်ပြင်၌ထိပ်တန်းဖြေရှင်းချက်ပေးသူကိုယ်စားပြုကော်မတီ, အုပ်စုသစ်ကို screen ကိုမျက်နှာပြင်များ, အင်ဂျင်နီယာအမှုန်များနှင့်ကျယ်ပြန့်ကြည့်ရှုထောင့်ယခုမရရှိနိုင်အဖြစ် illumination ၏တူညီနေမှုတိုးတက်အောင်ဘို့နှင့် Polarized နှင့်အတူလေဆာ illumination ပိုကောင်းအောင်များအတွက်နည်းစနစ်များအပါအဝင်မျက်နှာပြင်နည်းပညာကိုပြောင်းလဲမှာကြည့်ရှုမည် ဖန်သားပြင်။
"ဗတ္တိဇံရုပ်ရှင်ရုံများအတွက်အသံ - မွေးစားခြင်းအပေါ်တစ်ဦး Update ကို, Standard နှင့် Postproduction" ဂျူလီယန် Pinn, ဂျူလီယန် Pinn, Ltd. Pinn ၏မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာတို့ကတည်းဖြတ်ကြလိမ့်မည်ဘရိုင်ယန် Vessa, အများ၏ကုလားထိုင်နဲ့ဆွေးနွေးမှုဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ် SMPTE ရုပ်ရှင်ရုံအသံစနစ်များနည်းပညာဆိုင်ရာကော်မတီ (TC-25CSS) နှင့်အသံ၏အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးမှာဒီဂျစ်တယ်အသံ mastering Sony က ရုပ်ပုံများ Entertainment က; ; ဖိုင်များ, Skywalker အသံမှာအသံကဒီဇိုင်နာလိမ့်မည် ဒန် Huerta, AMC ရုံတင်ပြသမှာမျက်မှောက်နဲ့အသံနည်းပညာ၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ။ အဆိုပါအုပ်စုသည်ပြဇာတ်ရုံအော်ပရေတာ, စတူဒီယိုနှင့်အင်ဂျင်နီယာများ၏အမြင်များထံမှနည်းပညာအသစ်ဆန်းစစ်ကြလိမ့်မည် လက်ရှိစွဲငြိဖွယ်ရာသောအသံတစ်ခုအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါစံအပေါ်တိုးတက်မှုအဖြစ်ရုပ်ရှင်ရုံ၌ဤနည်းပညာ၏မွေးစားသုံးသပ်ရန်; နဲ့ content အာဏာပိုင်များသက်ရောက်မှုတွေဆွေးနွေးပါ။
"ရုပ်ရှင်ရုံ Virtual Reality, Multiscreen နှင့် immersive ရုပ်ရှင်ရုံ" ဟုအဆိုပါရုပ်ရှင်ရုံများတွင် virtual reality များ၏အလားအလာမှာရှေ့ဆက်ကြည့်ရှုမည်။ အဆိုပါ panel ကဆွေးနွေးမှုရစ်ချတ်ဝလေအားဖြင့်တည်းဖြတ်ပါလိမ့်မည်, SMPTE ဥရောပ, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, အာဖရိကနှင့်ဗဟိုနှင့်တောင်အမေရိကဒေသများအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် Sundog မီဒီယာ Toolkit ကို, Ltd. ဝလေ၏ CEO ဖြစ်သူဒါဝိဒ်သည် McKimmie, 20th Century Fox မှာ post ကိုထုတ်လုပ်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး, နှင့် Ted Schilowitz, 20th Century Fox မှာအနာဂတ်အားဖြင့်ပူးပေါင်းပါလိမ့်မည် နှင့် Barco မှာ "CinemaVangelist" ။
"Navigator Big အရောင်: အနာဂတ်အတှကျသငျခနျးစာနှင့်အခွင့်အလမ်းများ" တိုးမြှင်အရောင်အစအဆုံးအကုန်အဘို့အပုံရိပ်ဖမ်းယူခြင်းနှင့် display ကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်; လေ့လာသူ metamerism နှင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲဘို့အလားအလာထောင်ချောက်အပါအဝင်တိုးမြှင့်အရောင်အစအဆုံးအကုန်၏ပရိသတ်ကိုအမြင်အတွက်မကြာသေးမီကိစ္စတွင်လေ့လာမှုများ, မီးမောင်းထိုးပြ; နှင့်များ၏ဖန်တီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုသရုပ်ပြဖို့နောက်ဆုံးပေါ်လေဆာအနာဂတ်နည်းပညာတွေကိုသုံးပါ "ကြီးမားသောအရောင်။ " ဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးစဉ်အတွင်းက Moderator နှင့်စပီကာဒါဝိဒ်သည် Long ကအစီအစဉ်သဘာပတိ BS Motion Picture သိပ္ပံ, နည်းပညာ Rochester တက္ကသိုလ်မှရုပ်ရှင်ပွဲတော်နှင့် Animation ရဲ့များ၏ကျောင်းကပူးပေါင်းပါလိမ့်မည် ဝေါ့ဒစ္စနေး Animation ရဲ့စတူဒီယိုမှာ Dolby Labs ကနှင့် Stefan လောနိတျမွို့, အကြီးတန်းဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာမှာအသုံးချ Vision ၏သိပ္ပံ Group မှ, အရောင်သိပ္ပံရောဘတ် Atkins ။
ဂျင်မ် Whittlesey, SMPTE သူချင်း "DCP Update ကိုနှင့်အနာဂတ် Delivery Options ကိုအလယ်အလတ်ပါလိမ့်မယ်: ဂြိုဟ်တု, Fiber, နှင့်အင်တာနက်, "ဆရာယောဟနျ Hurst, CineCert LLC ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်အကြီးအကဲနည်းပညာအရာရှိချုပ် featuring တစ်ဦး session တစ်ခု; မာကု Waterston, စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် CineActive Solutions မှာအထွေထွေမန်နေဂျာ၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ; ယောဟနျသ Wolski, ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, Deluxe မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု၏ပြသခဲ့သည်န်ဆောင်မှု; နဲ့ Chris Witham, အဆိုပါဝေါ့ဒစ္စနေးစတူဒီယိုမှာဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံ၏ဒါရိုက်တာ။ တည်ဆဲ hard drive ကိုလုပ်ငန်းအသွားအလာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံပြန်ဖွင့်ဖွင့်ဖို့သော့၏ဖြန့်ဖြူးခြင်း, နောက်တွဲယာဉ်နှင့် preshow ကြော်ငြာအကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးတဲ့ဆွေးနွေးမှုအောက်ပါ; စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများကဆနျးစစျလိမျ့မညျ SMPTE ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံထုပ်ပိုး (SMPTEစာတန်းထိုး, အရာဝတ္ထု-based အသံ, stereoscopic 3D, မြင့်ဘောင်နှုန်းထားများ (HFR) နှင့် ပတ်သက်. လက်ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံ Initiative (DCI) သတ်မှတ်ချက်နှင့်ယင်း၏တန်ဖိုးအကြံပြု -DCP) ။ အဆိုပါအုပ်စုသည်လည်းဆွေးနွေးကြမည် SMPTEပိုမိုမြင့်မားနည်းနည်းနှုန်းထားများနဲ့ Dynamic 3D စာတန်းထိုး, ပစ္စည်းဖလှယ်ရေး Format ကို (MXF), အပြည့်အဝ encrypt လုပ်ထားစာတန်းထိုးနှင့်အရန်ဒေတာအတွက် -DCP ရဲ့ထောက်ခံမှု။
SMPTE အသင်းဝင်များသည် SMART သို့မဟုတ် Conference Flex Pass မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် NAB အသင်းဝင်မဟုတ်သောနှုန်းထားကိုဒေါ်လာ ၁၀၀ ယူရန်၊ သို့မဟုတ်အခမဲ့ Exhibits-Pass ကိုရယူရန်မတ်လ ၂၇ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ code SD01 ကိုသုံးနိုင်သည်။ TSC အစီအစဉ်အချိန်ဇယားကိုအွန်လိုင်းတွင် www ။smpte.org / tsc2015 ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ SMPTE www မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။smpte.org ။
6,000 အဖွဲ့ဝင်များကထက်ပိုမို - ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်အမှုဆောင်အရာရှိ, အင်ဂျင်နီယာများ, ဖန်တီးမှုနှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, သုတေသီများ, သိပ္ပံပညာရှင်များ, ဆရာ, ဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ - ကမ္ဘာ့တစ်လျှောက်လုံးကဏ္ဍများအတွက်ဖြည့်ဆည်းသူ Society ကရေရှည်တည်တံ့။ ယင်းနှင့်အတူလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့မိတ်ဖက်မှတဆင့် ဟောလိဝုဒ် Post ကိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ (R) (HPA (R)), ဒီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကျွမ်းကျင်မှု, ထောက်ခံမှု, tools များနှင့်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံများ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပြီးများအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦများ, ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များ, ကြော်ငြာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပေးသူကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသိုင်းအဝိုင်းကပြည့်စုံစေသည် မီဒီယာနှင့်အခြားပြောင်းလဲနေသောမီဒီယာအကြောင်းအရာ။ ပူးပေါင်းအပေါ်ပြန်ကြားရေး SMPTE www မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။smpte.org / join ။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/SMPTE/SMPTE-2014TSCcrowd.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: 2014 မှာလူအစုအဝေး NAB ပြရန်'' s ကိုရုပ်ရှင်ရုံအပေါ်နည်းပညာထိပ်သီးအစည်းအဝေး
ဓာတ်ပုံ Credit: NAB / က Rob Cohen ကို
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/SMPTE/SMPTE-PatGriffis-SMPTEAnnualConference.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Pat Griffis, SMPTE နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံ
2014 NAB ပြရန်, NAB ပြရန် 2014 audio အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ Show ကိုနည်းပညာထိပ်သီး NAB post ကိုထုတ်လုပ်မှု SMPTE Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society က 2015-02-28
ယခင်: မျက်မှောက် & အသံရုံ Harman ရဲ့ Studer Vista က X ကိုဒစ်ဂျစ်တယ် Console ထည့်ပေးသည်
နောက်တစ်ခု: 2015 HPA Tech မှသီးသန့် (r) Record ကိုတက်ရောက်, အမြင့်ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တစ်ဦးက New နာမည်ဖြင့်အဆုံးသတ်